2020 Manifestos – Free Expression Myanmar
၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုင်ငံရေးပါတီများ​၏ ကတိကဝတ်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက် ဝက်(ဘ်)စာမျက်နှာ
2020 election: Manifesto comparison tool
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း နှင့် လေ့လာမှု နည်းစနစ် About & Methodology
ဤဝက်(ဘ်)စာမျက်နှာသည် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ကတိကဝတ်များကို မဲဆန္ဒရှင်များသိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
FEM ၏ ပထမရည်မှန်းချက်သည် နိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံးက လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ၄င်းတို့၏ ကတိကဝတ်ပြုလွှာတွင် ထည့်သွင်းရန်အတွက် တိုက်တွန်းအားပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ဒုတိယရည်မှန်းချက်မှာ မဲဆန္ဒရှင်များ မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် ဖြစ်သည်။
FEM သည် လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး မည့်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီကိုမျှ ပံ့ပိုးထားခြင်း မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ခုတည်းသော တောင်းဆိုချက်မှာ လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝ ရရှိရန်သာ ဖြစ်သည်။ FEM အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုလျှင်
FEM သည် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုချင်းစီကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ၄င်းတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းတွင် ခိုင်မာသည့် ကတိကဝတ်များ ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကဝတ်များကို အထွေထွေလူ့အခွင့်အရေး၊ အထွေထွေ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်( ဥပမာ- ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အသရေဖျက်မှု)၊ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၊ သတင်းအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွင့်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေး၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်နှင့် အမုန်းစကား ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်(၇)ခု ခွဲခြားထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပါတီအသီးသီး၏ သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းတစ်ခုစီကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှိုင်းယှဉ်ပြီး အထက်ဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ် (၇) ခု အောက်တွင် ပါတီတစ်ခုစီအလိုက် အမှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကဝတ်များ အားကောင်းခိုင်မာမှုအပေါ် မူတည်၍ အမှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို အခြေခံ၍ တိုင်းတာထားခြင်းဖြစ်သည်။
အမှတ်ပေးစနစ်ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် ပါတီတစ်ခုချင်းစီက ၄င်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်ဟု ကတိကဝတ်ပြုထားသည့် အရာများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာပြီး ၄င်းအချက်အလက်များကို မဲဆန္ဒရှင်များ အလွယ်တကူနားလည်စေရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးရန်သာဖြစ်သည်။ မည်သည့် ပါတီတစ်ခုခုကိုမျှ သီးခြား ပံ့ပိုးထောက်ပံ့လိုခြင်း အလျှင်းမရှိပါ။
ဤ ဝက်(ဘ်)စာမျက်နှာတွင် ကတိကဝတ်များကိုသာ အကဲဖြတ်မှာဖြစ်ပြီး ၎င်းကတိကဝတ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းများ မပါဝင်ပါ။ ပါတီများ၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ကတိကဝတ်များ (သို့မဟုတ်) ပါတီများ၏ ယခင်ကာလမှ အကောင်အထည်ဖော်နေဆဲ ကတိကဝတ်များ ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ရမှတ်များကို ပေးထားခြင်း မရှိပါ။ မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် မည်သည့်ပါတီ၏ ကတိကဝတ်များကို ယုံကြည်သည်၊ မယုံကြည်သည်ကို ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေအတွက် အနည်းသာ ပါဝင်သည့် ပါတီပေါင်းများစွာရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ပါတီများကို ဤTool တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ FEM သည် ပါတီများအားရွေးချယ်ရာ၌ ၄င်းတို့၏ အွန်လိုင်းထောက်ခံမှုကို အခြေခံသည့် ရွေးထုတ်မှုပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဤTool တွင် (ရွေးချယ်ချိန် သြဂုတ်လ ပထမပတ်၌) အွန်လိုင်းထောက်ခံမှု ထင်ထင်ရှားရှားရထားသော ပါတီ ၂၁ ခု အဓိကပါဝင်သည်။
သင်အလိုရှိသော အချက်အလက်များကို ပါတီ (သို့မဟုတ်) ခေါင်းစဉ်အလိုက် ရွေးချယ်စီစစ်နိုင်သည်။
ပါတီများစွာကို တစ်ပြိုင်တည်း ရွေးချယ်စီစစ်နိုင်သည်။
ပါတီတစ်ခုချင်းစီအကြောင်း သို့မဟုတ် ပါတီအသီးသီးကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဖတ်ရှု့နိုင်သည်။
FEM ၏ အမှတ်ပေးသုံးသပ်ထားမှုများ သို့မဟုတ် ပါတီတစ်ခုချင်းစီ၏ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များကို သင်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ဖတ်ရှူ့နိုင်သည်။
ပါတီတစ်ခုချင်းစီ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကဝတ်များကိုလည်း ပြန်လည်ဖတ်ရှု့နိုင်သည်။
မှတ်ချက်များ၊ မေးခွန်းများနှင့် တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်များအတွက်ကျေးဇူးပြုပြီး FEM နှင့် ဆက်သွယ်ပါ။
အောက်ပါ လင့်ခ်များကို အသုံးပြု၍ ပါတီအသီးသီး၏ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း အပြည့်အစုံကို ရယူလိုက်ပါ။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀ ၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀
ကိုးကန့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀ ၊ ကိုးကန့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀ ၊ ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀၊ လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀၊ မွန်အမျိုးသားပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
နာဂအမျိုးသားပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀၊ ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
ပြည်သူ့ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀
ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀ ၊ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
‘ဝ’အမျိုးသားပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀၊ ‘ဝ’ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၂၀၊ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ၂၀၁၅
The Manifesto Comparison Tool enables voters to understand political parties’ commitments to freedom of expression.
FEM’s first objective is to encourage all parties to include commitment to freedom of expression in their manifesto. Our second objective is to encourage informed voting.
FEM is independent and does not support any party. Our only demand is human rights. Read more about FEM >
FEM contacted each of the parties and asked them to make strong commitments in their manifestos.
We categorise commitments under7topics: general human rights, general free speech (including for example criminal defamation), media freedom, right to information, digital rights, protest, and hate speech.
We analysed and compared each manifesto, giving each partyascore for each of the7topics.
Scores are given for the strength of the parties’ manifesto commitments. Strength is measured on the basis of international standards.
The purpose of scoring is to give voters easily-understood comparative information on what each party is committing to do to further Myanmar’s democratic transition. The purpose is not to support any particular party.
This Tool measures promises not delivery. Scores are not given on the basis of the likelihood of commitments being implemented, or on the party’s past history in implementing their commitments. Voters decide whether they trust party promises or not.
Myanmar has many small parties, most of which have few candidates. This tool does not include the smallest parties. FEM createdaformula to identify parties based on their online support. This tool focuses on 21 parties with significant online support.
You can filter results either by party or by topic.
You can choose multiple parties.
You can read about an individual party, or compare parties.
You can see FEM’s scores or you can read the manifesto commitment itself.
You can also look back at each party’s 2015 manifesto commitment.
Please get in touch with FEM.
Download the parties’ full manifestos using the following links:
ALD manifesto 2020
ANP manifesto 2020, ANP manifesto 2015
CNLD manifesto 2020
KDUP manifesto 2020, KDUP manifesto 2015
KSDP manifesto 2020
KSPP manifesto 2020, KSDP manifesto 2015
LNDP manifesto 2020, LNDP manifesto 2015
MUP manifesto 2020, MNP manifesto 2015
NLD manifesto 2020, NLD manifesto 2015
NNP manifesto 2020
NUP manifesto 2020, NUP manifesto 2015
PNO manifesto 2020, PNO manifesto 2015
PP manifesto 2020
SNLD manifesto 2020, SNLD manifesto 2015
TNP manifesto 2020, TNP manifesto 2015
UBP manifesto 2020
USDP manifesto 2020, USDP manifesto 2015
WNP manifesto 2020, WDP manifesto 2015
ZCD manifesto 2020, ZCD manifesto 2015
ခေါင်းစဉ် ရွေးပါ – Choose topic (no choice=all)
ပါတီအမည် ရွေးပါ – Choose party
လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီအသီးသီး၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်များ – Compare parties on human rights
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိက၀တ်များ2020 manifestos
FEM သည် တိကျသေချာသောကတိကဝတ်များရယူနိုင်ရန် ပါတီတစ်ခုချင်းစီ၏ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၄င်းတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းပါ ကတိကဝတ်များ အားကောင်းခိုင်မာမှုကို အခြေခံ၍ ပါတီတစ်ခုချင်းစီကို အမှတ်ပေးခဲ့သည်။
ဤအခွင့်အရေးများအား အကာအကွယ်ပြုရန် အားကောင်းခိုင်မာစွာ ကတိကဝတ်ပေးထားသည့် ပါတီများကို အမြင့်ဆုံးအမှတ်ဖြစ်သော ကြယ် ၅ ပွင့် ပေးထားသည်။ အားကောင်းခိုင်မာသည့် ကတိကဝတ်ဟူသည် နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများကို ပြည့်မှီသော ကတိကဝတ်တစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများအရ ကတိကဝတ်ပြုသော ပါတီတစ်ခုသည် ကြယ် ၅ ပွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အသင့်အတင့်ခိုင်မာသော ကတိကဝတ်ပြုသည့် ပါတီများကိုမူ ကြယ် ၄ ပွင့် ပေးထားသည်။ အသင့်အတင့်ခိုင်မာသော ကတိကဝတ်ဟူသည် ကောင်းမွန်သော်လည်း နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းအရ ပြည့်ဝခြင်း မရှိသော ကတိကဝတ်များကို ဆိုလိုသည်။
အသင့်အတင့်အားနည်းသော ကတိကဝတ်ပြုထားသည့်ပါတီများကိုမူ ကြယ် ၃ ပွင့် ပေးထားသည်။ အသင့်အတင့်အားနည်းသော ကတိကဝတ်ဟူသည် ၄င်းအခွင့်အရေးများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ ကတိကဝတ်ပြုထားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
အလွန်အားနည်းသော ကတိကဝတ်ပြုထားသည့် ပါတီများကို ကြယ် ၂ ပွင့် ပေးထားသည်။ အလွန်အားနည်းသော ကတိကဝတ်ဟူသည် ၄င်းအခွင့်အရေးများ၏ အနည်းငယ်၊ (သို့မဟုတ်) ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျသော ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများအပေါ်တွင် မူတည်ထားသော လူ့အခွင့်အရေးများ၊ (သို့မဟုတ်) လူသားတစ်ဦးချင်း​၏ လူ့အခွင့်အရေးထက် နိုင်ငံသား​၏ လူ့အခွင့်အရေးကိုသာ ကတိကဝတ်ပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
၄င်းအခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ မည့်သည့်ကတိကဝတ်မျှမပြုထားသည့် ပါတီများကိုမူ ကြယ် ၁ ပွင့် ပေးထားသည်။
ပါတီများ၏ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ အားကောင်းခိုင်မာမှုပေါ်မူတည်၍ အမှတ်များကို ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ကတိကဝတ်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုဖြစ်နိုင်ချေအပေါ် (သို့မဟုတ်) ကတိကဝတ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ၄င်းပါတီများ၏ အတိတ်သမိုင်းများ အပေါ် အခြေခံ၍ အမှတ်များကို ပေးထားခြင်း မဟုတ်ပါ။
အမှတ်ပေးရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်သည် လာမည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ပါတီတစ်ခုချင်းစီက မည်သို့လုပ်ဆောင်ပေးမည်ကို ကတိကဝတ်ပြုသည့်အပေါ် အလွယ်တကူနားလည်သဘောပေါက်နိုင်စေသည့် နှိုင်းယှဉ်သတင်းအချက်အလက်များအား မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများထံ ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်သီးခြားပါတီတစ်ခုကိုမျှ ထောက်ခံဖော်ပြရန် မရည်ရွယ်ပါ။
ဤနှစ်အစောပိုင်းတွင် FEM သည် ပါတီတစ်ခုချင်းစီနှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးခဲ့ကာ ၄င်းတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းတွင် အားကောင်းခိုင်မာသော ကတိကဝတ်များပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တစ်ပါတီနှင့် တစ်ပါတီ နှိုင်းယှဉ်ခံရသည့်အခါ ရလဒ်အနေဖြင့် ပါတီများအားလုံးသည် ပိုမိုအားကောင်းခိုင်မာသည့်ကတိကဝတ်များ ပေးလိမ့်မည်ဟု FEM မှ မျှော်လင့်ပါသည်။
FEM reviewed each party’s manifesto looking for specific commitments. FEM then gave each partyascore based on the strength of the commitments in its manifesto.
The highest score of5stars is given to parties which make strong commitments to protect these rights. A strong commitment isacommitment that fulfils international democratic standards. Thereforeaparty which commits to international democratic standards will receiveascore of5stars.
4 stars is given to parties who make fairly-strong commitments. A fairly-strong commitment is one which is good, but not quite the level of international democratic standards.
3 stars is given to parties who makeafairly-weak commitment. A fairly-weak commitment isacommitment to only part of these rights.
2 stars is given to parties who makeavery weak commitment. A very weak commitment isacommitment toasmall part of these rights, or undemocratic standards, or limited to citizens only.
Parties which make no commitment are givenascore of 1 star.
Scores are given on the basis of the strength of the parties’ manifesto commitments. Scores are not given on the basis of the likelihood of those commitments being implemented, or on the parties’ past history in implementing their commitments.
Earlier this year, FEM contacted each party and informed them of what we were doing, and asked them to make strong commitments in their manifestos. FEM hopes that all parties will make stronger commitments asaresult of being compared to one another.
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီအသီးသီး၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်များ – Compare parties on free speech
သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီအသီးသီး၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်များ – Compare parties on media freedom
သတင်းအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီအသီးသီး၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်များ – Compare parties on right to information
ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီအသီးသီး၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်များ – Compare parties on digital rights
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီအသီးသီး၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်များ – Compare parties on protest
အမုန်းစကားနှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီအသီးသီး၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်များ – Compare parties on hate speech
NUP လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★★☆☆
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိက၀တ်များ2020 manifesto
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိက၀တ်များ2015 manifesto
ပါတီ၏ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းတွင် အောက်ပါကတိက၀တ်များ ပါ၀င်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းပါ အခွင့်အရေးများကို အခြေပြု၍ မိမိနိုင်ငံနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိအောင် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မည်။
အခြေခံဥပဒေပါ ဒီမိုကရေစီရပိုင်ခွင့်များနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များ၊ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို နည်းလမ်းတကျမှန်ကန်စွာ ကျင့်သုံးနိုင်စေရန် ဂရုပြုဆောင်ရွက်မည်။
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်။
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ အမျိုသမီးများသည် အမျိူသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးများကို ခံစားရရှိစေရမည်။
နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စသည့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ထူးချွန်ထက်မြက်သော အမျိုးသမီးများ ပေါ်ထွန်းလားစေရေးနှင့် ဆုံဖြတ်ခွင့်ရှိသည့် နေရာရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည်။
အခြားပါတီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ >
The party’s 2020 manifesto includes the following commitments:
Based on the rights of Universal Human Rights Declaration, but suitable and flexible with our country.
Commit to practicing democratic rights and freedoms correctly, and the basic human rights in the Constitution.
Participate actively in the United Nations organisations and other international organisations.
Ensure women get equal rights with men, in accordance with Constitution.
Encourage outstanding and excellent women in politics, education, health, economics and the social sector respectively, and to be in decision-making role.
Compare against other parties >
ပါတီ၏ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းတွင် အောက်ပါကတိက၀တ်များ ပါ၀င်ခဲ့သည်။
၅။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းပါ အခွင့်အရေးများကို အခြေပြု၍ မိမိနိုင်ငံနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိအောင် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မည်။
၅။ အခြေခံဥပဒေပါ ဒီမိုကရေစီပိုင်ခွင့်များနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များ၊ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို နည်းလမ်းတကျမှန်ကန်စွာ ကျင့်သုံးနိုင်စေရန် ဂရုပြုဆောင်ရွက်မည်။
၆။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအတွင်း ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် တန်းတူရည်တူရှိစေရေး။
၇။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ တွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်။
၁၁။ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ အမျိုသမီးများသည် အမျိူသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးများကို ခံစားရရှိစေရမည်။
၁၅။ မသန်စွမ်းသူများအတွက် အခြားသူများနည်းတူ တန်းတူရည်တူအခွင့်အရေးများ ခံစားရရှိနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်များကို အခြားနိုင်ငံသားများနည်းတူ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်။
The party’s 2015 manifesto included the following commitments:
5. Based on the rights of international Human Right declaration, make it suitable and flexible with our country.
5. Commit to practice correctly on democratic rights and freedoms, and basic Human Rights involved in constitution.
6. To be equal accordance with democracy among in ethnicities.
7. Participate actively in United Nation organizations and international organizations
11. In accordance with constitution, ensure women to get equal rights with men.
15. For disable person, serve to get equal rights with others and to take part and participate equally on state responsibilities with other citizens.
UBP လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★★★☆
ခ (၃) ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နိုးကြားတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။
ခ (၄) နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့၏အကျိုးစီးပွား တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေမည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ သဘောတူညီချက်များနှင့် စာချုပ် စာတမ်းများကို လက်ခံကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မည်။
င (၃) တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ စီရင်ဆုံးဖြတ် နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မည်။
(ဆ) နိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုများရရှိခံစားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်မည်ဆ
(၄) မြန်မာနိုင်ငံက ပါဝင်ထားသော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာချုပ်များပါ စံနှုန်းများ နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်။
(င) (၁) နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစသည့် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ကျား၊မ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်မည်။
ဆ (၂) ပြည်သူအားလုံး လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ အယူဝါဒ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ဥပဒေနှင့် အညီ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရရှိရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်မည်။
Cooperate and be active with the United Nations, international organizations, regional organizations.
Improve the people’s interests, beneficial to international laws, agreements and contracts for measures to be adopted.
Free the judicial sector in accordance with the law.
Protect all human rights, measures to be able to enjoy the freedom and security of the person Myanmar’s human rights treaties, including the measures to be implemented in accordance with the standards: political, Business, State-building in various sectors, such as gender, social equality, and to encourage women to become involved.
Prohibits discrimination based on religion, ethics and focus on securing equal rights in accordance with the law.
ပါတီကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
The party was established in 2019.
USDP လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★★☆☆
၂(စ) လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ – ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံသားတိုင်း၏ အခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များ ရရှိစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်။
၂(စျ) တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝရရှိခံစား နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးမည်။
၂(တ) ဘာသာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ – လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို ထောက်ခံအားပေးမည်။
၃(ခ-၃) ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လူ့အခွင့်အရေးများ ရရှိခံစားရေးကို ဆောင်ရွက်မည်။
၃(ဃ-၂) ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဆီယံနှင့် ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။
၃(စ) လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် – အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်မည်။[….]
2. လွတ်လပ်စွာ စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်။
3. လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်။
5. ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်နှင့် ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်
7. နိုင်ငံသားတို့၏ မူလအခွင့်အရေးများ။ ၃(စျ- ၂) အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးသည့် ဥပဒေများကို ခေတ်နှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် ပြဌာန်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မည်။
၃(ဋ- ၁) ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် အမျိုးသမီးများ တိုးတက်ပါဝင်ရေးနှင့် ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေးအတွက် လိုအပ်သော ဥပဒေများ ပြဌာန်းဆောင်ရွက်မည်။
၅(ဋ) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ပေးအပ်ထားသော နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို နိုင်ငံသားတိုင်း အပြည့်အဝရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ပါမည်။
2(f) human rights policy – in accordance with the constitution to ensure the rights of citizens and the rights efforts.
2(a) in accordance with the existing laws and the rights of workers to be able to fully enjoy everything endeavors.
2(a) religious policy – will be supported by the right to freedom of religion.
3(-3) and the United Nations Universal Declaration of Human Rights, to enjoy human rights in accordance with the terms of the action.
3(d -2) Cooperative actively with the United Nations, international organizations, ASEAN, and regional organizations.
3(f) Plan to Human Rights – action as the following. [….]
2. Freedom to conductabusiness.
3. freedom of belief and religion […]
5. Right to vote and stand asacandidate.
6. Right to education.
7. Primary rights of citizens.3(i 2) Serve to enact laws which will protect worker’s rights in accordance with age.
3(k-1) Serve and enact needed laws for women to develop and inclusive in respective sectors, and for gender equality
5(k) Serve for every citizen to full access on citizen rights, and freedom of religion and belief given by constitution.
၇ (က) (က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အား [….] လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှုနှင့်တရားမျှတမှုတို့ကိုအခြေခံပြီး [….] ဒီမိုကရေစီအရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးများ ၊ […]နှင့်အညီတည်ဆောက်သွားမည်။
၈( ခ) တိုင်းရင်းသားအားလုံးသည် တန်းတူညီမျှမှု အခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှု အခွင့်အရေးတို့ကို ခံစားခွင့်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
၉( ဃ) ဒီမိုကရေစီအရေး၊လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက် ဒီမိုကရေစီရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးရင့် ကျက်ခိုင်မာသော အဆင့်သို့ကူးပြောင်းတက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် မပါမဖြစ် လိုအပ်သည့် ဥပဒေအချက်များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်သွားမည်။
၁၆(ဆ၂) လူတိုင်းလက်လှမ်းမီသော သာတူညီမျှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်လွှမ်းခြုံမှု ကျယ်ပြန့်စေရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
၁၆ (ဈ၃) တောင်သူလယ်သမားများ၏ကုန်သွယ်စီးပွားလွတ်လပ်ခွင့်များ အတွက်အစဉ်ကြိုးပမ်း သွားမည်ဖြစ်သည့်[….] ။
၁၆(ည၁) အလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေး အကာအကွယ်ပေးသည့်ဥပဒေများကိုခေတ်နှင့်အညီ ဖြစ်စေရန်ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး[…] ။
၁၉ (က) နိုင်ငံသားတိုင်းတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှု အခွင့်အရေးခံစားခွင့်ရရှိအောင်ဖော်ဆောင်ပေးမည်။
၁၉(ခ) အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ […] လွတ်လပ်စွာ စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်၊[…..] ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်နှင့် ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်၊ ပညာသင်ကြားခွင့်၊ နိုင်ငံသားတို့၏ မူလအခွင့်အရေးများအပြည့်အဝရရှိအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်။.
7 (a.a) Construct the Republic of the Union of Myanmar [….] in accordance with [….] democracy, national equality and self-autonomy based on [….] liberty, equality and justice.
8 (a) Serve to all ethnicities to obtain equality right, freedom right, justice right .
9 (d) Amend and added essential laws to transit democracy developed and mature stage for Democracy and Human Right.
16 (g 2) Serve to wide equal health care system coverage everyone is accessible.
16 (i 1) Serve in accordance with law to farmers to get their right and benefits.
16 (i 2) To protect farmer’s right and protect in accordance with raise economy law.
16 (i 3) Try to farmers’ trade freedoms [….]
16(j 1) To Amend laws which protect Labour’s right to be In accordance with the age [….]
16 (j 2)Serve to labours to work equally and justly.
19 (a) Serve to get equal right of all citizens
19(b) In accordance with constitution, serve to obtain fully on [….] freedom of business, freedom of religion and belief, [….]right to vote and right to be elected, right to education, citizens’s primary right
PP လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★★★☆
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို လေးစားလိုက်နာသွားမည်။
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းသွားရန်နှင့် တည်ဆဲဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ပြဌာန်းသွားမည်။
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်အရေးယူခြင်းနှင့် ပြန်လည်ကုစားရေးအစီအစဉ်များကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသတ်မှတ်ရ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
အမျိုးသမီးများအား ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ပိုမိုပါဝင်လာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ကျား၊မ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများကို အလေးထားပြီး နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (ICCPR)ကို အမြန်ဆုံး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး သဘောတူ ဆောင်ရွက်မည်။
ဒီမိုကရေစီ၏ အခြေခံအကျဆုံသော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို အစိုးရအဆင့်ဆင့်တွင် ဖော်ဆောင်သွားမည်။
Will respect the Universal Declaration of Human Rights.
Attend an independent Human Rights Commission and revise existing laws.
Expose human rights violations, with penalties and remedial programs carried out to specify the procedure.
Include more women in various sectors and the availability of gender equal rights be carried out to promote.
International human rights standards and political rights. Sign the international treaty (ICCPR) as soon as possible with measures to be agreed.
The basis of democracy, make open transparent government implemented in stages.
ပါတီကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
The party was established in 2017.
PPP လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★☆☆☆
နိုင်ငံတော်၌ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် ညီမျှခြင်းတည်း ဟူသော လောကပါလတရားများ ပိုမိုထွန်းကားရန် နိုင်ငံသားများ ၏ မူလအခွင့်အရေး နှင့် တူညီသော အခွင့်အလမ်းများကို နိုင်ငံသားတိုင်း လက်လှမ်းမှီ ရရှိစေရန်
အနာဂတ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများထပ်မံ မဖြစ်ရေး၊ တရားမျှတမှုကို လက်တွေ့ကျကျလက်လှမ်းမှီရေး၊[…]ဒီမိုကရေစီရပိုင်ခွင့်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် အခွင့်အလမ်းများ သာတူ ရယူနိုင်မည့် ညီမျှရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ပေးရန်
In the state, Justice, freedom and equality named eternal principles to be develop more, and to access opportunities same as primary rights of citizens for each citizen.
To implement as soon as possible by government – not to happen human right violations in furture, to access justice in practice, […] protect democratic rights, and equality plans which will access equal opportunities.
NLD လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★★★☆
နိုင်ငံတကာစာချုပ်စာတမ်းများ၊ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၏ ဆုံးဖြတ် ချက်များနှင့် ဆီလျော်စေရန်။
တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှု ထွန်းကားစေရန်။
ပြည်သူလူထု၏ စိတ်လုံခြုံမှုနှင့် ကိုယ်လုံခြုံမှုကို တရားမျှတစွာ အကာအကွယ်ပေးရန်။
ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ရေး၊ တန်းတူညီမျှသော နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိပြီး ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး။
အမျိုးသမီးများသည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍအသီးသီး တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိစေရေးအတွက် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများ ထိရောက်မှုရှိစေရန်နှင့် လိုအပ်သော ဥပဒေများ ရေးဆွဲပြဌာန်း ဆောင်ရွက်ရန်
Ensure consistency in human rights standards.
Comply with decisions from international treaties.
Justice, freedom, and equality.
Protection of the safety and security of the people fairly.
Ensure the law and judicial independence,
Gain equal citizenship rights and the right to self-determination, democracy, federalism building.
To be effective the enacted law for equality to women on politics, economics, social sector and other various wth men and to enact needed laws.
အခန်း ၂.၁။ ။ (အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်း) အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး၊ဒီမုိကရေစီစံနှုန်းများနှင့်ညီညွတ် ရမည်။
အခန်း ၂.၆။ ။ (အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်း) နိုင်ငံသားများ၏ တန်းတူညီမျှမှု အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည်။
အခန်း ၃(က၄)။ ။ တရားမျှတပြီး ဘက်လိုက်မှုကင်းမည့် တရားစီရင်ရေးစနစ် ထူထောင်ရန်
အခန်း ၃(က၅)။ ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်၊ တရားစီရင်ရေးစနစ်ပေါ်ပေါက်ရန် ဆောင် ရွက် မည်။
အခန်း ၃(က၆)။ ။ ပြည်သူလူထု ရသင့်ရထိုက်သော လွတ်လပ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုကို ထိပါးစေသည့် ဥပဒေများအား ဖျက်သိမ်း မည်။
အခန်း ၃(က၇)။ ။ အခြေခံဥပဒေက အာမခံထားသောအခွင့်အရေးများကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်၍ ခေတ်နှင့်အညီ မြှင့်တင် သွား မည်။
အခန်း ၃(ခ၇)။ ။
အခန်း ၃(ဃ၃)။ ။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့ စသည်တို့နှင့် ရင်းနှီး ခုိင်မာစွာ ဆက်ဆံမည်။
အခန်း ၃(ဃ၄)။ ။ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကဏ္ဍကို အထူးအလေးပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
P2. NLD has always stood firmly for … human rights
P2. [NLD] primary goals included: the emergence ofatruly democratic government that would guarantee basic human rights
Section 2.1. [A reformed constitution] To be in accordance with basic human rights and democratic standards.
Section 2.6. [A reformed constitution] To defend and protect the equal rights of citizens.
Section 3.a.4. Establishajudicial system that is fair and unbiased.
Section 3.a.5. Establish executive and judicial systems that support the rule of law.
Section 3.a.6. Revoke legislation that harms the freedom and security that people should have by right.
Section 3.a.7. Defend effectively those rights guaranteed by the constitution, and strengthen those rights in accordance with the present era.
Section 3.c.1. The Tatmadaw must be an institution that defends and protects democratic principles.
Section 3.d.3. To have close and strong relations with the UN.
Section 3.d.4. To give particular emphasis to the role of civil society organisations in communicating with the international community.
KSDP လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★★☆☆
ပညာရေးတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအ‌ရောင်၊ လိင်၊ နေရပ်များအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေဘဲ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိရမည်။ ကျား၊ မရေးရာ မူဝါဒ (Gender Policy)ကို အောက်ပါအခြေခံမူများအပေါ်တွင် ရပ်တည်ဆောင်ရွက်မည် –
၁။လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည်။ ၂။နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမူရေးကဏ္ဍအသီးသီးတွင် တန်းတူညီမျှရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည်။
Set up youth centers for creative youth
Education, religion, skin color, sex, must have equal rights without discrimination based on their place of residence. Gender Policy measures to stand on the following principles: 1. measures to respect human rights; 2. The political, economic and social equality in action in various sectors.
CNLD လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★★☆☆
အခန်း(၂) ၊ (၆) အခြေခံအခွင့်အရေးများတွင် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်း (UDHR) နှင့် နိုင်ငံကကာစံချိန်စံညွှန်းပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရမည်။
အခန်း (၂၁) ကျား၊ မရေးရာ မူဝါဒ (Gender Policy)ကို အောက်ပါအခြေခံမူများအပေါ်တွင် ရပ်တည်ဆောင်ရွက်မည် –
၁။ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည်။
၂။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမူရေးကဏ္ဍအသီးသီးတွင် တန်းတူညီမျှရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည်
၃။ နည်းမျိုးစုံဖြင့် အကြမ်းဖက်ခြင်းမှ တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည်။
၄။ ကျား-မတန်းတူရေးဆိုင်ရာ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြှင့်တင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်မည်။
1. Respect for human rights in the process – fundamental rights in the UDHR, and based on standards to be enacted. Gender Policy measures to be to stand on the following principles: 1. Respect of human rights in the process; 2. political, Economic and social equality in action in various sectors; 3. prevent all forms of violence with protection measures; 4. Gender equality in multilateral development promotion measures.
ပါတီကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
The party was established in 2018.
PNO လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★☆☆☆
အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရရှိနိုင်သည့် ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် ပေါ်ထွန်းလာစေရန် အခြားညီနောင် တိုင်းရင်းသားများနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သွားမည်။ နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရေး။
Fundamental human rights and democratic rights fully available and for the emergence ofademocratic federal system to be implemented. A political role for women.
Equality between sexes.
MUP လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★★☆☆
ဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေခံဖြင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအားထူထောင်ရာတွင် လက်ခံကျင့်သုံးနေသည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အလမ်းများကို ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီကျင့်သုံးသွားမည်။ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့အား ဒီမိုကရေစီ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး ရင့်ကျက်ခိုင်မာသော အဆင့်သို့ကူးပြောင်းစေရန်အတွက် လိုအပ်မည့်ဥပဒေအချက်အလက်များကို ထပ်မံပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်သွားမည်။
လူမျိုး ဘာသာ ကျား/မ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မရှိစေဘဲ လူတိုင်းတန်းတူ အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှသည့် အခွင့်အရေးရရှိရန် အကောင်အထည်ဖော် ကျင့်သုံးသွားမည်။
Establishingabasic federal democracy adopted with human rights applied in accordance with democratic standards.
Democratic rights, Human rights, to the stage of mature and well-founded democracy, amend and add needed laws.
Equal right to work without discrimination on ethnicity, religion and gender. Implement and practice to access equal right of women and men.
SNLD လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★★★★
၇.၂ လူ့အခွင့်အရေး လူ့အခွင့်အရေးကို နိုင်ငံရဲ့ လေးစားလိုက်နာရမယ့် စံတန်ဖိုးတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ရပါမယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းပါ လူ့အခွင့်အရေးများကို ထောက်ခံအားပေးရမယ့်အပြင် လေးစားလိုက်နာမှုလည်းရှိရပါမယ်။ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးဖောက်မှုတွေမှာ ကြံရာပါ မဖြစ်စေဖို့နဲ့ ချ ိုးဖောက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်တားဆီး ကာကွယ်ရပါမယ်။ နိုင်ငံသားများသာမက နိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးရဲ့ လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အာမခံချက်များ ပေးနိုင်ရပါမယ်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို လိုက်နာဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံအတွင်းမှာ လွတ်လပ်ပြီးအမှီအခိုကင်းတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းထားရှိရပါမယ်။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဆောင်ရွက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရှိရပါမယ်။ စီမံကိန်းကြီးများကြောင့် ဖြစ်စေ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ လူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်များကြောင့် ဖြစ်စေ၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများကြောင့် ဖြစ်စေ နေရပ်စွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့ရသူများ(IDPs) နှင့် ဒုက္ခသည်များ (refugees)အပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးဖောက်မှုများကို ကာကွယ်တားဆီးပေးပါရမယ်။ သူတို့အတွက် အခြေခံ လူမှုဘဝလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးရပါမယ်။ တန်းတူရေးနှင့် လူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိရပါမယ်။ တန်းတူရေးနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးကို အပြန်အလှန်လေစားသမှုရှိဖို့နဲ့ စုံလင်ကွဲပြားမှုကို တန်ဖိုးထားတဲ့ လူမှုအဝန်းအဝိုင်း ဖွံ့ ဖြိုးစေဖို့ အားပေးကူညီတဲ့ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တာဝန်ဝတ္တရားများ ချမှတ်ထားရပါမယ်။ တန်းတူရေး၊ စုံလင်ကွဲပြားမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို အသိအမှတ်ပြု လေးစားလိုက်နာခြင်းဆိုတဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ နားလည်လက်ခံလာဖို့ ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ – -လူတိုင်းမှာ အခြားသူများ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံရေးအရလွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ယူဆပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ထင်မြင်ပိုင်ခွင့်[…]ရှိရပါမယ်။ – အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးများအားလုံးမှာ တန်းတူညီမျှတဲ့ အခွင့်အရေးများ၊ အခွင့်အလမ်းများနဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားများရှိပါတယ်။ ဂျဲန်ဒါဆိုင်ရာ တန်းတူညီမျှမှုကို အလေးထားခြင်းဟာ လူ့အခွင့်အရေးကို တန်ဖိုးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။။
(7.2) Human Rights
Human rights and respect for the country must be specified as actual values. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) must be respected.
Not to accomplice in Human Right violation and have to prevent from that.
We must be able to guarantee the rights of all persons. A free and independent human rights organization must be formed to comply with human rights. Must cooperate with international human rights organizations.
Prevent violations on IDPs and refugees because of huge projects, natural disasters, artifical issues and weapom wars . Have to support and supple their basic social needs.
Equality and human rights commission must be formed. Equality and human rights, including the right to freedom of expression.
To developasociety which has mutual respect and value the difference of multi-culture, have to pass the responsible action to encouragement plans. equality, Full of diversity and respect for the human rights recognized to come To understand good practices of recognizing and respecting equality, multi-culture and human rights, the Commission mandate should be used.
Without disturbing, everyone has to access right to freedom of thought politically, right to opinion. Every women and men has equal rights, opportunities and responsibilities. Special consideration on Gender Equality is valuing Human Right.
No clear commitment.
LNDP လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★☆☆☆
အမျိုးသမီးများ၊ကလေးငယ်များနှင့် မသန်စွမ်းသောသူများအား အထူးကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးနင့်ရပိုင်ခွင့်များအား မြင့်တင်ဆောင်ရွက်မည်။
To help women, children and those with disabilities and their rights.
ZCD လူ့အခွင့်အရေး human rights ★★★☆☆
ဒီမိုကရေစီသည် လူလူချင်းတူညီသည်ဟူသော မူကိုလက်ခံသူတိုင်း တရားဥပဒေအမြင်တွင် တူညီစေကြောင်း၊ လွတ်လပ်စွာ အသက်ရှင်နိုင်ခွင့်၊ တွေးတောကြံဆတီထွင်ခွင့်၊ ပြောဆိုရေးသားခွင့်၊ စည်းရုံးပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း
As the democracy respects the standard of equality, everyone is equal before the law. Everyone shall be equal in the right to life, the right to opinion, the right to freedom of persuade
ဒီမိုကရေစီသည် လူလူချင်းတူညီသည်ဟူသော မူကိုလက်ခံသဖြင့် လူတိုင်းသည် တရားဥပဒေအမြင်တွင် တူညီစေကြောင်း၊
ယင်းတူညီသောအခွင့် အရေးမှာ အသက်ရှင်နိုင်ခြင်းအခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်စွာတွေးတောကြံဆတီထွင်ပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဝေဖန်စည်းရုံးပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ရှာဖွေနိုင်ခွင့်ဖြစ်ကြောင်း၊
As the democracy respects the standard of equality, everyone is equal before the law. Everyone shall be equal in the right to life, the right to opinion, the right to freedom of persuade.
UBP လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် Free speech ★★☆☆☆